Amiir Alwaleed bin Talal oo ka dhawaajiyay Hadal ka farxiyay Dumarka kunool Dalka Sacuudiga!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Amiir Alwaleed bin Talal oo ka dhawaajiyay Hadal ka farxiyay Dumarka kunool Dalka Sacuudiga!!
Amiir Alwaleed bin Talal oo ka dhawaajiyay Hadal ka farxiyay Dumarka kunool Dalka Sacuudiga!!
Amiirka Sacuudiga, ee maalqabeenka ah Alwaleed bin Talal, ayaa ku baaqay in waddankisa uu ka qaado xanibaada saararan dumarka inay wadaan baabuurta.
Sacuudiga waa waddanka kaliya ee adduunka oo dhan oo dumarka aysan wadi karin baabuur, dad u ololeeya in la joojiyo sharcigaas ayaa loo xiray inay jabiyeen sharciga Dalka.
“Waxaa la joogaa waqtigii ay dumarka Sacuudiga ay wadi lahaayeen baabuur” ayuu sheegay.
Amiir Alwaliid ayaa ah ayaa ka mid ah dadka hadla ee ka tirsan boqotooyada Sacuudiga oo horay u dhaleeceeyay xadgudubka xaquuqda bin’aadanka ee dumarka Sacuudiga.
‘Fal xaqdaro ah’
Amiirka oo ka mid ah dadka ugu lacagta badan adduunka, ayaa sheegay: ” in loo diido dumarka inaysan wadin baabuur ayaa ah maanta xuquuq la mid ah midii loo diiday inaan wax la barin ama aan la siin warqad aqoonsi.
” kuligood waa xaqdaro dhaqan bulsho, taasoo ka adag mida uu ogolaanayo sharciga dhinaca diinta.”
Website of Alwaleed Bin TalalImage copyright Alwaleed Bin Talal
” Waxaa jira in ka badan hal milyan oo dumar Sacuudi ah oo u baahan inay si ammaan ah shaqo u aadaan subax walba.
“Waxay mar walba masuuliyada saaran tahay in nimanka ay shaqadooda ka tagaan si ay u qaadaan xaaskooda iyo carruurtooda, taasoo ah wax ay samayn karaan dumarka kaligood.
“In la shaqaalaysiiyo darawalo ajnabi ah ayaan lacagta reerka saamayn ku yeelanayn oo kaliya, laakiin waxay keentaa in balaayiin dollar ay ka baxdo sanad walba dhaqaalaha Sacuudiga oo dibadda loo diro” ayuu ku daray.
Previous Postmarkab hub lagula qabtay Bada Soomaaliya baaritaan lagu sameeyay ayaa lagu ogaday in ‘Iiraan hub ku daabushay Soomaaliya iyo Yemen’! Next PostHilibka Digaaga Qaarkii Waxa uu Kugu sababi karaa Cudurka Kansarka DAAWO MUUQAAL!!